Pedrerol: “Sergio Ramos wuu ka tagayaa Real Madrid, mana jirto waddo lagu laabto” – Gool FM
Pedrerol: “Sergio Ramos wuu ka tagayaa Real Madrid, mana jirto waddo lagu laabto”
(Madrid) 15 Feb 2021. Heshiiska Sergio Ramos ayaa dhacaya xagaagan, iyadoo Suxufiga Spanish-ka ah ee Josep Pedrerol uu ku kalsoon yahay in difaacan uusan qandaraaska u cusboonaysiin doonin Real Madrid.
Pedrerol waxa uu aaminsan yahay inuu jiro go’aanka la gaaray oo aan laga noqon karin marxaladdaan.
“Sergio Ramos waa uu ka tagayaa Real Madrid,” ayuu u sheegay Axaddii Warsidaha ‘El Chiringuito’.
“Uma maleynayo inay jirto wax macquul ah oo uu kusii joogayo, ma jirto waddo lagu laabto.
“Real Madrid waxay rumeysan tahay inay xaqiiqo tahay, waxayna aaminsan tahay in Ramos uu u qalmo inuu u saxiixo koox kasta oo uu doonayo inuu ku kasbado qandaraaskii ugu weynaa ee ugu dambeeyay ka hor inta uusan soo gabagabaynin xirfaddiisa ciyaareed.
“Xaaladahan oo kale, Real Madrid ma siin doonto lacag intaas ka badan.”
Pedrerol ayaa sii waday inuu dhaleeceeyo mowqifka Ramos, isagoo sheegay inuu rumeysan yahay in kabtanka uu aqbalo shuruudaha heshiiska hoose ee loo soo bandhigay sababo la xiriira caabuqaan Korona Fayras ee saameeyey dhaqaalaha Adduunka.
“Waa ceeb, waxaana u maleynayaa in Ramos uu qalad sameynayo,” ayuu yiri Pedrerol.
Kahor kulanka Barcelona iyo PSG – Wax ka ogoow wax qabadka ugu muhiimsanaa Messi kulamadii uu ka hor tagay kooxaha reer France